Manchester United, iyo Manchester City oo ku dagaalamaya Xidiga lagu qiimeeyo 93 Milyan | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester United, iyo Manchester City oo ku dagaalamaya Xidiga lagu qiimeeyo 93...
Manchester United, iyo Manchester City oo ku dagaalamaya Xidiga lagu qiimeeyo 93 Milyan
Manchester United iyo Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay labaduba xiiseynayaan inay keenaan Premier League weeraryahanka Napoli Victor Osimhen .
22 jirkaan ayaa Napoli kaga soo biiray Lille bishii Sebtember ee la soo dhaafay wuxuuna u dhaliyay 17 gool 38 kulan oo uu u saftay kooxda reer Talyaani tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 7 gool sideed kulan oo uu saftay intii lagu jiray ololihii 2021-22.
Sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , qaab ciyaareedka xiddiga reer Nigeria ayaa soo jiitay indhaha kooxaha Man United iyo Man City, halka Paris Saint-Germain ay iyaduna xiiso u qabto.
Warbixinta, si kastaba ha ahaatee, waxay sheegaysaa in madaxweynaha Napoli Aurelio De Laurentiis uu kaliya dhageysan doono dalabyada ku kacaya 110m (£ 93m) oo ku aaddan weeraryahankan.
Blues ayaa Osimhen kula jirta qandaraas ku eg June 2025, taasoo kooxda ka dhigaysa meel adag marka ay timaado wada xaajood kasta oo suurtagal ah.
Man City ayaa wali raadineysa weeraryahan cusub, iyadoo seegtay Hotspur Harry Kane xagaagii hore, halka Man United la rumeysan yahay inay qorsheyneyso inay bartilmaameed ka dhigato weeraryahan kale 2022 inkastoo ay dib ula soo saxiixatay Cristiano Ronaldo ka hor dhamaadka suuqa kala iibsiga dhowaan.
Previous articleWar Rasmi ah: Sacuudiga oo dhameestiray iibsashada Kooxda Newcastle United
Next articleXog: Ahlu-Sunna oo loo geeyey arrin uu dalbaday Qoor Qoor – Maxaay ku jawaabeen?
Cali Guudlaawe oo sameeyey xilal ka qaadis iyo magacaabis
Mid ka mid ah murashaxiinta Aqalka Sare ee Jubaland oo la...
Paul Scholes oo digniin u diray Manchester United ka hor Kulanka...
Arsenal oo xiiseyneysa saxiixa Xidiga Sardar Azmoun ee Kooxda Zenit St...
Rio Ferdinand oo Cadeeyay go’anka Raheem Sterling ee Kooxda Manchester City